တီဗီ Beelink GT1 (3GB RAM + 32GB ROM) မှစျေးနှုန်း ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » တီဗီ Receiver Beelink GT1 (3GB 32GB RAM ကို + ROM ကို)
အစဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကိုTV နဲ့ TV ကို set ကို-top boxတီဗီ Receiver Beelink GT1 (3GB 32GB RAM ကို + ROM ကို)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 2019 15 ဒီဇင်ဘာ 1: 13
စျေးနှုန်းသမိုင်း Beelink GT1 Ultimate 3GB DDR4 + 32GB EMMC တီဗီ Box ကို
€ 66,22 - 2019 13 နိုဝင်ဘာလ
€ 58,16 - 20193နိုဝင်ဘာလ
€ 66,22 - 2019 19 အောက်တိုဘာ
€ 58,16 - 2019 12 အောက်တိုဘာ
€ 66,22 - 2019 30 စက်တင်ဘာ
€ 71,59 - 2019 28 စက်တင်ဘာ
€ 58,16 - 2019 21 စက်တင်ဘာ
€ 66,22 - 2019 18 စက်တင်ဘာ
Nuo: 2019 17 sausio
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: €80,23 - 2019 17 sausio
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 58,16 - 2019 13 ဇူလိုင်လ
Beelink GT1 Ultimate 3GB DDR4 + 32GB EMMC တီဗီ Box ကို
Beelink GT1 Amlogic S912 4K တီဗီ BOX 3GB / က Black 32GB
refurbished Beelink GT1 Ultimate HD ကိုအန်းဒရွိုက်တီဗီ Box ကို
Beelink GT1 Amlogic S912 4K တီဗီ BOX 2GB / က Black 16GB
Beelink GT1 Ultimate | အိုင်တီ Worth?
Beelink GT1 Ultimate က Android TV Box ကိုသုံးသပ်ချက် - 3GB RAM ကို Amlogic S912
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: တီဗီ Receiver Beelink GT1 (3GB 32GB RAM ကို + ROM ကို)
ပြင်ပပါဝါ Adapter ကို Mode ကို
remote control ဘက်ထရီ
2 က x AAA ဘက်ထရီ (မပါ)
1 1 x ကို Beelink GT1 Ultimate တီဗီ Box ကို Remote Control ကို x, 1, HDMI Cable ကို x ပါဝါ Adapter ကို 1 x, 1 အင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ် x
တီဗီ Receiver Beelink GT1 (3GB 32GB RAM ကို + ROM ကို) ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ9ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း တီဗီ Receiver Beelink GT1 (3GB 32GB RAM ကို + ROM ကို)
ဘော့ - 2019 10 ဇွန်
ငါဆိုသောကြောင့်စျေးနှုန်းနှင့် spec ၏ကောင်းသောပေါင်းစပ်၏ဤ Streamer ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မကိရိယာမှ dissapointed ခဲ့သည်။ ငါတှေ့အဓိက cons: 1 ။ ဒါဟာလမ်းလည်းပူနွေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 80 မှတက်စင်တီဂရိတ်နှင့်ပိုပြီးဘွဲ့ထ (!) ဆိုအပြည့်အဝအရှည်ရုပ်ရှင် (ငါ Processor ကိုအပူချိန်တိုင်းတာခဲ့ပါတယ်။ အနည်းငယ်ဘက်မလိုက် apps များနှင့်အတူ) စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်။ ဒါကြောင့်ငါကရှည်လျားလွန်း life.2 ဝန်ဆောင်မှုရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ကြောက်လန့်ဖြစ်၏။ ဒါဟာ 720P resolution ကိုထက်ပိုပြီး၏ Youtube ကိုကလစ်များမကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။ 1080P သို့မဟုတ် 4k ကလစ်ပ်ဝေးက၎င်း၏လက်လှမ်းမမီ ... .3 ကျော်လွန်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ Analog စအသံထွက်မရှိခြင်း။ ကိုယ်ကသာ HDMI နဲ့ optical (SPDIF) အသံဖိုင်ထွက်ရှိပါတယ်။4။ ငါပြင်းထန်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များခဲ့ကြပါပြီ - ရုပ်ရှင်တွေဒါပေမယ့် to.5 ဆိုပါစို့ wasnt အဘယ်မှာရှိတစ်ဦး Specific setup ကိုအပေါ်ဘောင်ပြီးနောက်ဘောင်ကြှမျးကငျြစှာ run ခဲ့ပါဘူး။ ၎င်း၏ WIFI အလွန်အားနည်းနေသည်။ သင်သည် router သည်အတွင်းသဘောပေါ် Streamer ထားထိုအခါမူကားသင်သည် wifi မလိုအပ်ပါဘူး ... သင်က router ကိုမှအနီးကပ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပဲ rj45 cable.6 အတူကချိတ်ဆက်မဟုတ်လျှင်နီးပါးအသုံးမကျ။ နှင့်ပိုပြီး ... အကြောင်းကို 1 လကြာအသုံးပြုပြီးနောက်ငါပြန်ငါ၏အ4နှစ်ရှိပြီ Minix Neo ကို u1 (ကိုသွားလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဟာအစအပေါ်ကဒီမှာရောင်း GearBest) ဘယ်အနိမ့် spec ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်သစ်ကို Beelink ထက်အများကြီးပိုကောင်းလုပ်ဆောင်တယ်။ ငါ Beelink ၏အံ့သြဖွယ်သတ်မှတ်ချက်အကြှနျုပျ၏နှင့်ငါ့မိသားစုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့် upgrade ပါလိမ့်မယ်ငါကဝယ်အဘယ်ကြောင့်ဤစဉ်းစားမိတယ်။ ကံမကောင်းစွာသစ်ကို Streamer ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလျှော့ချပြန်ငါ၏အဟောင်းများကို Minix.I သွားဖောက်သည်များ၏ကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုဖော်ပြထားခြင်းရမယ်ပြီးနောက် ... ယခုတွင်ငါသည်အလွန်ကြီးစွာသောကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရှိ GearBest (များသောအားဖြင့်အမျှ) နှင့်သူတို့၏စစ်မှန်သောဒါပေမယ့်လည်းထုတ်ကုန်နိုင်စွမ်းမရဖြစ်တဲ့အခါထို့နောက်ဘာမျှမကူညီကြမည်ကိုကူညီလိမ့်မယ် ...
Giuseppe Castaldo - 2019 10 ဇွန်
This Beelink GT1 Ultimate Review was written by Troy from TROYPOINT after extensively using this Android Kodi Box for two weeks. The Beelink GT1 Ultimate comes inasmall size, measuring at only 96 mm wide and 96 mm long. The top of the device sportsasleek-looking triangle glossy pattern which addsanice touch. This device would appear asastate-of-the-art streaming box within anyone’s entertainment center. The remote that comes with the Beelink GT1 Ultimate is different than your typical Android TV Box remotes. This one includes buttons for your television such as power, volume up, and volume down. To use the television buttons, you must use the learn button on the remote with the proper codes for your specific tv brand. The remote also includesamouse toggle button,adelete button, volume up/down buttons, andasettings button to nameafew. I enjoy using this remote due to the additional options. The user interface is very easy to use and includesa“My Favorite” section on the home screen where you can add your favorite apps. It also includes two other panels that you can modify to your liking which are labeled for video and game applications. One thing I don’t like is that you can’t edit the other icons on the home screen and some of them I wouldn’t use onaregular basis. The Beelink GT1 Ultimate comes with Kodi installed but they have changed the name to Qodi. So, the icon on the front page reads “Qodi”, but it still launches the Kodi build that Beelink has installed on the system. I am assuming that they have changed the name of this to avoid any types of legal problems with Kodi. The pre-installed “Qodi” comes with some of the popular addons but not all of them. I went ahead and deleted “Qodi” from the device, went into Google Play Store and installed the most recent version of real Kodi which is Krypton 17.0 at the time of this writing. After doing this, the icon on the home page named “Qodi” will now launch our new version of Kodi Krypton that I just installed. The Beelink GT1 Ultimae also comes with an application called QodiMate which is meant to be an addons installer for Kodi. You can think of this as an app store for Kodi but it doesn’t include many of the better addons that are currently available. The device also is equipped with an update and backup manager that makes it easy to update the firmware when there isanew version released for the device. Android 6.0 comes installed on the Beelink GT1 Ultimate which is nice, especially due to the fact that Kodi 17 Krypton now requires at least 5.0 to run. The device includesavery powerful processor that you will now fine on many of the top-end Android TV Kodi boxes which is the Amlogic S912 2.0GHz,Octa Core. This powerful processor provides smooth streaming and quick interaction with the various menu items within the user interface. Download and upload speeds for the Beelink GT1 Ultimate were great. Onawireless connection, download speed was at 133.33 Mbps with upload speed at 19.79 Mbps. Onawired connection directly into the router, download speed was 133.66 Mbps and upload speed was 18.50 Mbps.
Evgeny - 2019 10 ဇွန်
ဤသည် Beelink GT1 Ultimate ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကျယ်ကျယ်နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့ဤ Android Kodi Box ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက် TROYPOINT ထံမှ Troy ကရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Beelink GT1 Ultimate ရှည်လျားကျယ်ပြန့်နှင့်မီလီမီတာသာ 96 96 မီလီမီတာမှာတိုင်းတာခြင်း, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားလာပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ထိပ်anice ထိထည့်ဘယ်တစ်ဦးချောမွေ့ပြောင်လက်ရတဲ့အရာတွေ-ရှာဖွေနေတြိဂံပုံစံ sports ။ ဒီကိရိယာကိုမည်သူမဆိုရဲ့ဖျော်ဖြေရေးစင်တာအတွင်း State-Of-The-Art streaming များ box ကိုအဖြစ်ထငျရှားပွလေိမျ့မညျ။ အဆိုပါ Beelink GT1 Ultimate နှင့်အတူကြွလာဒါကဝေးလံသောသင်၏အပုံမှန် Android တီဗွီ Box ကိုအဝေးမှထက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒီတစ်ခုထိုသို့သောချပါဝါ, အသံအတိုးအကျယ်ကိုတက်နဲ့ volume အဖြစ်သင့်ရုပ်မြင်သံကြားဘို့ခလုတ်ပါဝင်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားခလုတ်သုံးစွဲဖို့, သင်သည်သင်၏တီဗီအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်သင့်လျော်သော Specific codes တွေကိုနှင့်အတူဝေးလံခေါင်ဖျားပေါ် Learn button ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ ဝေးလံခေါင်သီအဆိုပါကိုလည်း mouse ကို Toggle အားခလုတ်တစ်ခုဖျက်မှုကိုခလုတ်, အသံအတိုးအကျယ်ကိုတက် / ဆင်းခလုတ်များနှင့်အနည်းငယ်အမျိုးမျိုးကြောင်း setting များကိုခလုတ်ကိုပါဝင်သည်။ ငါကြောင့်အပိုဆောင်းရွေးချယ်စရာဤဝေးလံခေါင်သီသုံးပြီးပျော်မွေ့။ အဆိုပါ user interface ကိုသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်သင်သင်အကြိုက်ဆုံး apps များထည့်နိုင်သည်ဘယ်မှာရှိပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ "ကျွန်မအကြိုက်ဆုံး" အပိုင်းပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစငျသညျဗီဒီယိုနှင့်ဂိမ်း application များအတွက်တံဆိပ်တပ်ထားပါသည်ဘယ်ဟာသင့်ရဲ့အကြိုက်မှပြုပြင်နိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ခုသည်အခြားပြားပါဝင်သည်။ ငါမကြိုက်ဘူးအရာတစ်ခုမှာသင်အိမ်ပြန် screen ပေါ်မှာအခြား icon တွေကိုတည်းဖြတ်မရနိုင်ပါနှင့်သူတို့ကိုအချို့ကိုငါပုံမှန်မသုံးမယ်လို့ Is ။ အဆိုပါ Beelink GT1 Ultimate installed ပေမယ့်သူတို့က Qodi မှအိမျတျောကိုပြောင်းလဲပြီ Kodi နှင့်တကွကြွလာ။ ဒါကြောင့်ရှေ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်အိုင်ကွန် "Qodi ဖတ်ပေမယ့်နေဆဲ Kodi Beelink စနစ်ပေါ်တွင် install ထားပြီးအဲဒီ Build လွှတ်တင်။ ငါသူတို့က Kodi နှင့်အတူဥပဒေရေးရာပြဿနာများကိုမဆိုအမျိုးအစားရှောင်ကြဉ်ပါရန်ဤ၏အမည်ကိုပြောင်းလဲပြီဒါကယူဆနေပါတယ်။ pre-installed "Qodi" သူတို့ထဲကနာမည်ကျော် addons အချို့ကိုသော်လည်းမရှိသမျှနှင့်အတူကြွလာ။ ငါရှေ့ဆက် သွား. ကိရိယာမှ "Qodi" ကိုဖျက်ပြီး, Play Store ကိုသို့သွားလေ၏နှင့်ဤအရေးအသား၏ထိုအချိန်က 17.0 ရူပတွန်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာအစစ်အမှန် Kodi ၏လတ်တလောဗားရှင်း installed ။ ဤသို့ပြုပြီးနောက် "Qodi" အမည်ရှိအိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် icon ကိုယခုငါပဲ installed ဒါကရူပတွန် Kodi ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗားရှင်းသစ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Beelink GT1 Ultimae လည်း addons Kodi များအတွက် installer ကိုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်ဘယ် QodiMate ခေါ် application တစ်ခုနှင့်တကွကြွလာ။ သငျသညျ Kodi တစ်ခု app store ကိုအတိုင်းဤစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်ဒါကပိုကောင်း addons အများအပြားမပါဝင်ပါဘူး။ အဆိုပါ device ကိုလည်းစက်ပစ္စည်းအတွက်ဖြန့်ချိမယ့်ဗားရှင်းသစ်လည်းမရှိတဲ့အခါ firmware ကို update လုပ်ဖို့ကလွယ်ကူစေသည်ဒါကတစ်ခု update ကိုနှင့်အရံသိမ်းဆည်းမန်နေဂျာတပ်ဆင်ထားသည်။ အန်းဒရွိုက် 6.0 အထူးသဖြင့်ကြောင့် Kodi 1 ယခုရူပတွန် run ဖို့ကအနည်းဆုံး 17 လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကိုရန်, ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာအဆိုပါ Beelink GT5.0 Ultimate ပေါ်တွင် install လာပါတယ်။ အဆိုပါ device ကိုဆိုလိုသည်မှာယခုသင်ထိပ်ဆုံးက Android တီဗီသေတ္တာများဟာ Amlogic S912 2.0GHz, Octa Core ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာ Kodi များစွာကိုအပေါ်ဒဏ်ငွေလိမ့်မည်အလွန်အစွမ်းထက် Processor ကိုပါဝင်သည်။ ဤသည်အစွမ်းထက် Processor ကို user interface ကိုအတွင်းအမျိုးမျိုးသော menu ကိုပစ္စည်းများနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့ streaming များနှင့်အမြန်အပြန်အလှန်ပေးစွမ်းသည်။
Isidore H6 6K PRO တီဗီ box ကိုနောက်ဆက်တွဲ
တီဗီ Receiver SCISHION V88 (1GB 8GB RAM ကို + ROM ကို)
Beelink BT3 Pro ကို Mini PC ကိုကွန်ပျူတာ
Voyou V1 Mini ကိုကွန်ပျူတာ
DK-8-KZ 1000mW လေဆာ graviruoklis ရောက်